Barro Xildhibaanka UK ee u ololeeya Somaliland: 2 Jeer ayaa xilal Wasiir looga qaaday fadeexado qabsaday - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Barro Xildhibaanka UK ee u ololeeya Somaliland: 2 Jeer ayaa xilal Wasiir looga qaaday fadeexado qabsaday - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xildhibaanka u dhashay dalka Ingiriiska ee Gavin Williamson ayaa muran badan ka dhaliyey Baraha bulshada, kadib markii uu mooshin geeyay Baarlamaanka Ingiriiska, kaasoo lagu doonayo in lagu aqoonsado maamulka goonida isu taagay ee Somaliland.
Xildhibaankan wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Muxaafidka (Conservative) ee talada haya dalka UK, wuxuuna ahaa madixii ololaha doorashada Ra’isul wasaare Boris Johnson sanadkii 2019-kii, isagoo markaasi sidoo kale soo noqday xoghayaha gaashaandhiga UK xilligii Ra’isul wasaare Therasa May, hase yeeshee xilka laga qaaday.
Gavin ayaa markii uu Boris xilka qabtay loo magacaabay xoghaya waxbarashada, taasoo haddana si degdega looga qaaday. Labada jeer ee xilalka laga qaaday wuxuu lugaha la galay muran fadeexadeed iyo eedeymo loo jeediyay.
Ra’isul wasaaradii hore ee UK Therasa May ayaa xilka ka qaadday Gavin Williamson sanadkii 2019-kii, isgoo ah xoghayah difaaca UK, markaas oo uu yimid Soomaaliya, waxayna ku eedeysay in uu saxaafadda u siiyey xog halis ku ah Amniga Qaranka UK.
Gavin waxaana lagu eedeeyay inuu faafiyey sir ku saabsan in barnaamijka 5G ee isgaarsiinta UK oo ay ku lug lahayd shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Huwawei. Arrintaas oo weji gabax ku noqotay UK, kadibna sababtay in shirkaddaasi laga mamnuuco UK, ana madaxa isla galaan dalalka Shiinaha iyo UK.
Sidoo kale ninkii uu soo dhisay ee Boris Johnson ayey qasab ku noqotay inuu xilka ka qaado bishii September 2021-dii, isagoo ahaa xoghayaha waxbarashada UK, kadib markii uu qirtay inay khalalaad ku jireen barnaamij imtixaanaadka iskuulaadka lagu saxayey oo kumbuyuutar ku dhisan, arrintaasina ay fadeexad waxbarasho noqotay.
Xilligaas waxaa si weyn loogu eedeeyay farsamada xumida iyo qalbi jebinta ardayga UK markii dhibihii ardayga kaalimaha sare si khalad ah hoos loogu dhigay, kadibna uu go’aano iska horjeeda qaatay, waxaana dhacay bannaabaxyo lagu dalbaday inuu is casilo oo keenay in xilka laga qaado.
Gavin Williamson wuxuu Soomaaliya yimid sanadkii 2019, isagoo magaalada Hargeysa kula kulmay madaxweynaha Somaliland, halkaasoo uu ka bilowday xiriirka labada dhinac oo wararka qar ay sheegayaan inuu kharash ku helay ololaha uu aqoonsiga ugu raadinayo Somaliland.
Previous article5 Xildhibaan oo lagu doortay Baydhaba (Akhriso Magacyadooda iyo sida ay kusoo baxeen)
Next articleMaxay ka wadahadleen Wakiilka Q/Midoobay ee Soomaaliya iyo Musharax Prof. Jawaari..?